'Ukuhlaselwa kweTitan' kubuye kusebenze - Tv
'Ukuhlaselwa kweTitan' kubuye kusebenze
Emva kweminyaka eli-15 esemoyeni, I-Naruto yahambisa umdlalo wayo wokugqibela ngoMatshi 23. Umkhuluwa wam, endachitha naye iiyure ezininzi sibukele umboniso, wayefuna enye into yokubulala ixesha. Ndathetha ngolu hlobo: Uhlaselo kutitan. Ngamadangatye.
Ngokusekwe kwimanga yaseJapan enegama elifanayo, iiNdawo zokuDada zaBadala Uhlaselo kutitan luthotho lwezinto ezenziwayo, endithetha ukuba yikhathuni. Kodwa yikhathuni enamabhongo abantu abadala oko kukuthi ngokuqinisekileyo akunjalo kumnandi kusapho lonke. Endaweni yoko, Titan yisaga entsonkothileyo malunga nokufalalism okwenzekayo kunye noloyiko-lwe-olungaziwayo njengosulelo. Ukongeza, kwaye kunomdla ngakumbi, imalunga nokuba ingakanani kanye iinjongo kubalulekile kwaye ngakumbi nini iziphumo ungazithwali. Oku kuthetha ukuba iyathetha, iyathandeka, kwaye ngamanye amaxesha ibuhlungu kakhulu, kodwa yenye yezona zinto zibalaseleyo kwi-intanethi (ye-intanethi), kwaye ndimi ngokuziva kwam wena -Kwakhona, ngokunjalo-kufuneka uyibukele.
Kude kube kucacisiwe kum ngolu hlobo lubhalisiweyo ngezimvo ezilungileyo malunga ne-anime haver uJustin Charity, bendingayazi loo nto I-Naruto yayithathwa njengephantsi. Emva koko, ndandingazi nokuba imboni ye-anime's iqabuke yayiyinxalenye yesizathu sokuba kwakunzima ukufumana uthotho lwentshukumo enkulu yokuvumelana. Ukubeka ngokulula, ukwenza ifayile ye- Ischemist epheleleyo Ifuna imali, iiyure zomntu, kunye nendawo ye studio, Okuninzi yazo zonke ezo zinto. Kwakukho i-boom phakathi kwiminyaka ye-2000, apho i studio zaseJapan zazikhupha isihloko kwisihloko, nganye ibiza kakhulu ukuvelisa nokuthengisa. Xa uninzi lwala maxesha makhulu, amanyathelo omnyhadala-wezitena, imali yabo yoma. Endaweni yabo safumana ukugcwala kwe-caricatured kunye nokuqina kancinci moe anime , eyayitshiphu kakhulu ukuyivelisa kwaye inokuba ubungakhomba kuyo ukuba ufuna ukwenza intlekisa ngephakathi. Ngo-2013, nini Uhlaselo kutitan okokuqala kwaqala ukuvakala, kwavakala kum njengomboniso oza kugcwalisa isenzo sokwenza ikhathuni, nangasiphi na isizathu. Kubonakala kuyothusa ukuyibiza okokugqibela uthotho inyathelo elikhulu, kodwa, emva koko, ngumboniso ombi. Kwaye emva kwexesha elinye lokuphumla kweenkwenkwezi, i-hiatus eyandisiweyo yenza ukuba kubonakale ngathi asinakuphinda siyibuyise.
Kodwa ngo-Epreli 1, ngaphezulu kweminyaka emithathu emva kwesiphelo seXesha 1, Titan ibuyisiwe kunye ne-premiere yayo ye-Season 2. Yeyiphi, ngokucacileyo, engekho apho kufuneka uqale khona ukuba awuqhelekanga. Masiqale endaweni yokuba umboniso ubekhona kwihlabathi, akunjalo?
Ukurhweba ngokuthengisa ikakhulu kwimilingo, Titan izisa indawo apho uluntu luye lwaphoswa phantsi kwimilenze yalo yokugqibela ziititan, ezibonakala ngathi ngabantu, kodwa zinjalo akunjalo abantu. Zinkulu kakhulu kwaye zoyikisa ngakumbi, kwaye zinokukhulisa yonke into-kubandakanya neentloko zazo-zibuyele emva ukuba zilahlekile. Ekuphela kwento eyaziwayo ngabo kwasekuqaleni komboniso kukuba babonakala ngathi bayakuthanda ukutya abantu ngelali egcweleyo, nangona kungenjalo indlala , uhlobo olunjengokuba wena okanye mna singapholisha ngengqondo ubungakanani besikhwama seetshipsi. Ukuze bazinike ithuba lokulwa nala marhamncwa, abantu baqulunqe izixhobo ezenza amajoni afana… cinga ukuba uRobin ebenjalo Kaninzi I-acrobatic, kwaye wayenokutshisa izikhonkwane zakhe zokubamba ezinqeni, ngoko ke izandla zombini zikhululekile ukuphatha amakrele. Ewe, oko.
Kodwa buyela kulwakhiwo lwehlabathi. Into eseleyo yoluntu ikhusela kwilizwe elingaphandle kweendonga ezintathu, ngokurhweba inkululeko yenkuselo. Amagama ezi ndonga ayisiyiyo yonke le nto ibalulekileyo (ngenxa yomxholo kunye nocwangco ngaphakathi ngaphakathi: Wall Sina, Wall Rose, Wall Maria), kodwa indawo ezibekwe kuyo zenza ngokucocekileyo izicwangciso zentlalo. Olona donga lwangaphakathi lukhusela ukumkani, ngelixa abo bahlala eludongeni olungaphandle ikakhulu bengabona bahlwempuzekileyo. Oku kwenza ezopolitiko ezithile, kodwa ngobomi bonke bomntu busemngciphekweni, nokhetho olonyanyekayo-njengokunciphisa iziphumo zendlala ngokuthumela amakhulu amawaka abantu abangaqeqeshwanga ukuba baphinde babuyise iWall Maria emva kokuba iwele kwi-arc yokuqala ( yep) - kubonakala ngathi kubalulekile ukusinda. Awusoze wenze impazamo yokusinda ngokuphumelela, kwaye, ngakumbi nangoku, ukuqonda kwakho ukuba kukuphi oku kuya kuba ngumceli mngeni. Zizinto ezingacacanga.
Titan kulandela umfana ogama linguEren Yeager owathi emva kokubona ukubulawa kwabantu okwaphelisa uxolo lweminyaka eli-100 phakathi kweendonga, wagqiba kwelokuba ajoyine umkhosi ukuze akhuphe iititan. Ezona zikhokelo ziphambili ngu-Eren, Armin Arlert, noMikasa Ackerman, abahlobo bobuntwana, bonke ababhalisayo. Ngelixa ubuchule buka-Eren obubonakalayo kukuqhuba kwakhe - uyindidi ye-meh kuyo yonke enye into- kwaye iArmin sisipho sakhe seqhinga, uMikasa unegunya lokulawula iimvakalelo kunye nomzimba wakhe, emenza abe lilungu kuye, kwaye kude uninzi lomgulukudu.
Ngexesha lokuqala labalinganiswa -kunye nabanye abambalwa abavela kwi-104th Cadet Corps- baphuhliswa ngendlela ye-flashback, ukuqhuma, kunye namaxesha athile, abanzi, bethetha gawk xa kuqhuma. Nokuba abalinganiswa abanemiphetho banikwa ubunzulu njengoko ngamnye kufuneka, ngaxa lithile, akhethe phakathi kokuzilondoloza kunye nokujongana nesoyikiso sabo sikhulu. Njengoko besokola, kuyacaca ukuba uxinzelelo alusoloko lusenza iidayimani; ityhila nje nantoni na engaphakathi.
Kungekudala uyakuqonda ukuba akukho mntu-nokuba ngamagorha akhethekileyo, ngakumbi hayi oyena mntu umthandayo - ukhuselekile. Ukuhamba nentliziyo engenakuthelekiswa nanto udinga ubuchule, umboniso uyaphikisana, kwaye kwangoko usadinga ithamsanqa. Kwesinye isiganeko, uKapteni uLevi, owamkelwa ngokubanzi njengelona joni lomeleleyo lomntu kwaye kakhulu ukuba angadlalwa, uqengqa iqatha lakhe , kwaye ngesiquphe ivakalelwa njengemeko yokufa okanye yokufa.
Leyo yinxalenye ebalulekileyo. Umlinganiswa ngamnye, nokuba ufike nini okanye kudala ekho, unikwa awabo into; I-quirk, ukuthandana okufutshane okubuhlungu, i-backstory, isiqwenga sokuhleba kwedolophu, i-CV, nantoni na. Oku kwenza ukuba kube nzima ukwazi ukuba ngubani oza kulandelwa linani, kwaye xa kunjalo ngokuqinisekileyo nguwe zive ilahleko nganye.
Ayisiyiyo yonke into eqaqambileyo, nangona. Ifana nokuninzi kweminye imiboniso phakathi, Titan unengxaki yokuhambahamba. Rhoqo, kwizihloko eziqaqambileyo, nokuba kukubuyela umva okanye ixesha elide langaphakathi elingena kwisenzo. Incoko etyhila imizuzu emithathu epheleleyo yexesha lokubaleka kufanele ukuba yenzeke kwimizuzwana yokubalisa. Ngelixa Titan Ngaba uneemfihlakalo ezithile ezithandekayo ezingafikeleleki kwingalo ezikugcina ubuya veki nganye, ezinye unokuzibona ngokulula, ngamanye amaxesha iziqendu ezibini okanye ezintathu ngaphambi kokuba abalinganiswa bazenze. Xa umninawa wakho osandula ukuguquka okwajongayo umboniso wenkosi yokufumanisa kwakho, kulungile. Akunjalo xa inguwe kuphela, kwigumbi lakho, ukhwaza uHulu. Ukuza kuthi ga ngoku, loo micimbi yokuhambahamba iya kungabonakali kancinci ngexesha lokuqala, ekwafumaneka kwiCrunchyroll (kunye neziqendu ezimbalwa zeXesha lesi-2). Kodwa baya kuphakama kwakhona njengoko uhamba ixesha lesibini, ekungokunje kukho iziqendu ezine ze-odolo ezili-12 ezikhoyo.
Imiba emincinci ecaleni, kufanelekile ukuba uhambe nayo ukuze ukhwele. Yinto ecekisekayo, ekhohlakeleyo, entle, kwaye ngamaxesha athile ahlekisayo Umhlaba ulinde ukuba uphononongwe- yonke into ebalulekileyo yekhathuni esiyilindeleyo ukusukela phakathi ku-aughts. Umbuzo, Titan ubuza, woyika ntoni?
Inguqulelo yangaphambili yeli bali ilahlekise inani leziqendu ezicwangcisiweyo Uhlaselo kutitan Ixesha lesibini. Ishumi elinambini, hayi ama-25, eyalelwa.
Ibhola ekhatywayo ikhetha ezona zilungileyo ngo-2019
Ibron james umdlalo ophumeleleyo
abaphakanyisiweyo abazizityebi ngama-asia oscar
ukubulala iimpahla zika-eve villanelle
Zonke iingoma zedrake